ikhaya » iindaba » I-Hollywood Professional Association ivula i-2018 Tech Retreat Ifowuni yeePhepha
Icandelo lokuchaza inkqubo yenkomfa ifuna iziphakamiso
ILOS ANGELES (Septemba 7 2017) - I hollywood Umbutho wobuNtu (HPA) uvule umnxeba lweziphakamiso ze-2018 HPA Tech Retreat®. Iingxenye eziphambili zeprogram - inkqubo ephambili kunye neendwangu zedrafestile yeemfuno zokutya - zichongwa ngefowuni yeziphakamiso. I-HPA Tech Retreat iya kwenzeka ngoFebruwari 19-23 2018 kwi-JW Marriott Desert Springs Resort kunye ne-Spa kwi-Palm Desert, i-CA (indawo yePalm Springs), indawo entsha yomcimbi.
Ngoku kwi23 yayord ngonyaka, isiganeko kwiPalm Springs sidonsa uluhlu olubanzi lwabahlali kunye nezivakalisi kwaye luquka iinkokheli kuzo zonke iinkalo zendalo. Ingenye yeziganeko ezibalulekileyo zonyaka ngamnye kumntu kunye neenkampani ezibandakanyekayo ekudalweni, ekuphathweni nasekuhanjisweni komxholo kwiindawo eziguqukayo zokuhambisa indawo.
Ifowuni yeZiphakamiso: iNkqubo ePhambili
Iprogram ephambili yenkqubo, egcinwe ngokuthe ngqo kwizinto ezingenakulengiso, zenzeke ngoLwesithathu ngoFebruwari ngo-21 ukuya ngoLwesihlanu ngo-Februwari 23, emva kwe-TR-X (i-Tech Retreat eXtra) kunye ne-supersession ngoMsombuluko nakwesiLwesibili, ngokulandelanayo. Ngokweprogram ye-maestro uMark Schubin, "Kwiprogram enkulu, NONYAKA enxulumene nemifanekiso ehambayo kunye nezandi ezihambelanayo [ngumdlalo olungeleyo], kubandakanyeka (kodwa kungaphelelwanga) nomxholo othile we-cinema, ukunciphisa izinga lokunciphisa, ulwaphulo-mva, amalungelo edijithali ulawulo, ukusetyenziswa kwamandla kwii-TV ze-HDR, uhlalutyo lwengxelo, i-gigapixel imaging, iirhafu eziphezulu, isandi esixilisayo, i-kleptomania ekuhanjisweni, i-GOPs ngexesha elide lokutshintsha ngokukhawuleza, ukutshintshana kweelwimi ezininzi, kunye neentetho zonxibelelwano , ukukhutshwa komthombo ovulekile, i-psychophysics, Ubungakanani ukungena kwi-zero latency, ukuhlala izihlalo kuma-cinemas, ii-soundfields, ukudluliselwa kwe-terabit, i-ultra-high-nantoni na, inyaniso ebonakalayo, umbala ogqamile, i-x-ray kwi-8K, ukuhamba kweendlela ezincinci, kunye ne-zoom zoom ze-32K imaging. Ngako-ke i-haptic, i-olfactory, ne-apptuous applications. "Ngale fowuni ede kakhulu," ukusuka kwimeko eya kubonwa kunye neendleko kwiindlebe, "inkqubo ephambili ngokuqinisekileyo ibe njengongeniso, inomdla, kunye nekhokelo njengeminyaka edlulileyo.
Iziphakamiso zeenkqubo eziphambili zentetho zifutshane kwaye zingabhaliswa kwaye zimele zingeniswe ngumbonisi ocetywayo. Amanqaku eSchubin athi, "Isivakalisi okanye ezibini ziqhelekile kwaye ukuba ezi zivakalisi ezimbalwa zinomdla, abafakela i-submitters baya kudibana." Iinkcazo kwiprogram ephambili ngokuqhelekileyo zithuba lesigama seyure, kuquka ukusekwa kunye ne-Q & A (ukuba kukho). Ixesha elide okanye elifutshane lingahle linikezelwe. Iiphaneli zihlala zide, kwaye ukuhanjiswa kwamapaneli kufanele kufake iipaneli kunye nomodareyitha (ukulungiswa kwamapanethi kunye neemodareyitha yimbopheleleko yombukeli).
Umhla wokugqibela wokungenisa iziphakamiso eziphambili zeprogram kukuphela kosuku ngoLwesihlanu, Oktobha 27 2017. Iziphakamiso kufuneka zithunyelwe ngqo kuMark Schubin tvmark@earthlink.net. Kwimeko apho ukungeniswa akuvunyelwanga ngokukhawuleza, abapostile mabaqhagamshelane noMnu Schubin ukuqinisekisa ukufumana. Izigqibo zilindeleke ekuqaleni kukaDisemba.
Ifowuni yeeNgcebiso: Iifomethe zeMadlophu yaseKhisimusi
Iifomfa zedlayile zasemakhaya ziqala kwi-7: I-30 AM ngeveki ezine ngexesha lokubuyela emva, uLwesithathu ukuya ngoLwesihlanu. I-Schubin iphawula, "Iifowuni zedrafestile zingabandakanya ulwazi lokuthengisa, kwaye iimodareyitha zetheyibhile zikhululekile ukufundisa, ukushumayela, ukubuza, ukubuza, ukubiza umnxeba, ukuthengisa okanye ukwenza nantoni enye egcina intetho ihamba ngeyure." I-HPA Tech I-Retreat roundtables yinxalenye ethandwayo ye-Tech Retreat, kwaye unikezela abahlali kunye neengcali ithuba lokuba bangene kwaye baxoxe ngezihloko ezibalulekileyo.
Akukho nkqubo yokuhlambulula i-roundtables zakusasa. Akukho ukubuyela kwisaphulelo sokubhalisa kuhanjiswe ngokumodareyitha i-roundtable ye-breakfast, kwaye zonke iimodareyitha ezijikelezayo zedrafti mazibhaliswe kwi-retreat. Iziphakamiso zeemirhubhe zeemviwo zedrafishe zingeniswa kuphela ngabamodareli abazicetywayo kuMark Schubin tvmark@earthlink.net. Amathuba okubonisa isidlo sakusasa sakusasazo, kwaye amabala azalise ngokukhawuleza. Nangona kungekho mhla wokugqibela, xa kuninzi inani letafile lifikile (32 ngosuku), akusayi kuphinda kwamkelwe. NgoLwesithathu noLwesine ngokuqhelekileyo zizalise umda; NgoLwesihlanu kaninzi akwenzi. Iziphakamiso mazibandakanye iintsuku ezifunwayo kunye nezihloko ezifunwayo.
Iinkcukacha ezongezelelweyo ze-2018 HPA Tech Retreat ziya kubhengezwa kwiiveki ezizayo, kubandakanywa izihloko ze-supersession, i-TR-X ekujoliswe kuyo, kunye neenkcukacha ze-Innovation Zone, kunye neeminina kunye neentlanganiso eziqhutywe kwangaphambili kwe-Tech Retreat.
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga ne-2018 HPA Tech Retreat, tyelela Www.hpaonline.com okanye shayela + 1 213 614 0860. Ngolwazi lokuxhaswa, nceda uqhagamshelane noJoyce Cataldo izenzakalo@hpaonline.com.
Ignite Uqhagamshelwano lobuchule
I-Blackmagic Design, iCanon, iCinnafilm, kunye ne-IBM Aspera kunye ne-Telestream ebizwa ngokuba yi-2018 Abaphumeleleyo be-HPA Engineering Excellence Award - Juni 28, 2018
U-Zoe Iltsopoulos uBory utyunjwe i-Vice-President kunye noMphathi-Jikelele wePanavision e-Atlanta - Juni 25, 2018
Kees van Oostrum ukukhokela i-American Society of Cinematographers kwiThemu yesiThathu - Juni 13, 2018
Cooke Optics HPA HPA Tech Retreat I-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, ukunciphisa i-bitrate, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Inkundla ye-Ultra HD ndiphila	2017-09-07
Previous: Icandelo loLawulo lwee-Optical of FUJIFILM ukuzisa i-Smallest & Lightest 4K, i-HDR-Intsebenziswano yokuLawulwa kweLensi
next: Musa Ukushiywa Ngaphandle Kwebusika: Ukubaluleka Kwemigangatho Yolwazi
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "I-Hollywood Professional Association ivula i-2018 Tech Retreat Call for Papers". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/hollywood-professional-sociation-opens-2018-tech-retreat-call-for-papers/. Enkosi.